Mistery momba ny lohataona ho an'ny ankizy
Ny fahalianana dia ny toetra mampiavaka ny zaza tsy manan-danja. Tombim-bary manana fahalianana mahafantatra an'izao tontolo izao, mitandrina ny zava-mitranga sy ny zava-bita voajanahary, mianatra manangana fifandraisana misy eo amin'ny sehatra ary mitarika tsikelikely ny fahitany ny zava-misy manodidina. Izany no antony, na dia eo am-piandohan'ny fandrosoana aza, ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra dia mila "mametraka fototra mafy orina", izay hiorina sy hivoatra ny toetran'ilay olona. Ireo dia fitsipi-pitondran-tena sy fitsipika, fitiavana ary fanajana ny havana sy ny olona akaiky, ny fitandremana amim-pitandremana ny natiora sy ny fahalalana ny lalàna. Ary raha ny voalohany "tsy afaka" sy "afaka" dia voafehy mazava tsara ao anatin'ny fifandraisan'ny samy ray aman-dreny sy ny zaza, dia mandeha araka ny fitsipika ho an'ny drafitra rehetra ny fifankafantarana ny ankizy miaraka amin'ny natiora. Manomboka toy izany koa izy io, manomboka amin'ny lalao voalohany, tantaram-pianakaviana ary fandinihana manokana, avy eo amin'ny fandaharam-pianarana fianarana ary mazava ho azy fa mifandray ny piozila.
Ireo momba ny ankizy madinika momba ny vanim-potoana, ary indrindra momba ny lohataona, hiresaka androany isika.
Nahoana isika no mila piozila ho an'ny ankizy?
Tamin'ny lasa taloha, ireo razambentsika dia nampiasa fomba fitenenana amin'ny fomba fanaony amin'ny fampianarana. Raha ny marina, ny tononkalo fohy amin'ny endrika fanadihadiana dia fotoana iray manokana hananganana dingana fianarana amin'ny endrika lalao iray. Mamaha olana, ny ankizy dia mianatra mieritreritra, mihaino ary mandre (ary izany dia mahita zavatra hafa), hampitahaina, handinihana ny vaovao voaray; Mampiroborobo ny fisainana ara-panoharana sy ny fahatsinjovana, ny fahatsiarovana sy ny fifantohana Mandritra izany fotoana izany dia mahazo fahafinaretana lehibe avy amin'ny fizotrany sy ny fahafaham-po avy amin'ny valiny ny ankizy, raha ny marina dia hita fa marina ny valiny.
Ankoatra izany, ny piozila dia manatsara ny fampiroboroboana ny fitaovam-pitenenana ary hampitombo ny voambolana, mamelabelatra ny feon'ny kabary. Raha fintinina, ny fahafaha-miteny dia fotoana iray tsy manam-paharoa, tsy vitan'ny manampy fotsiny ny "entam-pahalalana" ho an'ny ankizy, fa mahafinaritra ihany koa.
Ireo ankizy madinika momba ny lohataona
Fotoana mahafinaritra mandritra ny herintaona ny lohataona, mitondra zavatra tsara sy fanontaniana vaovao ho an'ny fiainam-pianakaviana kely izany. Ny Crumbs dia tsy mitsahatra ny manaitra ny fanovana izay mitranga ary miezaka ny hahazo valiny, momba ireo fanontaniana tiany. Fotoana izao hanoloana ny kilalaon-jaza ho an'ny ankizy, izay hanampy amin'ny fanamafisana ny fahaizan'ny fianarana mamiratra sy mahafinaritra kokoa, ary koa ny fanamafisana ny fahalalana voavolavola.
Miankina amin'ny vanim-potoana sy ny endriky ny fampandrosoana ny ankizy, ny safidy momba ny lohataona ny fahasarotana samihafa dia voafidy: fohy na lava, tsotra na rhythmic, raha ny lohataona na ny zavatra sasantsasany manokana miaraka aminy.
Noho izany, ny ankizy madinika indrindra 2-3 taona dia ho tonga amin'ny kilalao tsotra ho an'ny ankizy ho an'ny ankizy. Ohatra:
Miala ny ranomandry,
Ny saha dia levona,
Tonga ny andro ...
Oviana no nitranga izany? (Amin'ny lohataona)
Nihazakazaka haingana i Brooks,
Mafana ny masoandro.
Sambatra ny sparrow:
Nijery anay iray volana ... (Martsa)
Raha hitan'ny zazakely fa sarotra ny mamaly avy hatrany dia aza manafaingana azy. Ary dia fantany haingana ny endrik'ity lalao ity, ny ray aman-dreny afaka maneho mazava tsara: ny reniko dia maminavina, ary ny dadako no mihevitra, avy eo ny mifamadika amin'izany. Noho izany, takatr'ilay zazakely avy hatrany fa tsy ho ela dia hihena izany.
Ny ankizy efa zokiny dia efa mahafantatra ny tena zava-boaary voajanahary, ny anaran'ny voninkazo sy ny vorona sasany, ny fahazarana amin'ny biby, saingy mila manitatra bebe kokoa ny sehatra, voambolana, mianatra mieritreritra sy mandinika. Noho izany, tokony ho sarotra kokoa ny fialantsiny momba ny lohataona ho an'ny ankizy 3 ka hatramin'ny 5 taona:
Miandrandra kely -
Ny voalohany, izay be herimpo indrindra,
nijery ny akanjo mafana
Ala kely ... (Snowdrop)
Mbola lavitra ilay andro,
Kely ny fotoana tokony hatoriana.
Manohy ny fitarihana, mitarika ny làlana,
Ary lasa ... (Lohataona)
Hetsiky ny boribory,
amin'ny ravina maitso.
Ny hazo ambarako,
Mamafy voa aho,
Ny hetsika dia feno,
Miantso ahy izy ireo ... (Lohataona)
Ny lava maina,
Ambony dia lelafo mena midorehitra.
Tsy zavamaniry iray, fa manainga -
Mena mena mena ... (Poppy)
Yellow sarafanchik -
Ity ... (Dandelion)
Manana "enta-pahalalana" mahatalanjona, ny ankizy madinika dia afaka maminavina ny lahatenin'ny olon-dehibe. Io endri-javatra io dia azo ampiasaina mba hianarana bebe kokoa momba ny tranga voajanahary amin'ny lohataona, ny fampandrosoana ny fahaizana mamorona ary ny fifohazana mahaliana ny famakiana boky. Ankoatr'izay, ao amin'ny "arsenal" an'ny ray aman-dreny dia tokony ho ny ankizy madinika momba ny lohataona miaraka amin'ny fahasamihafan'ny fahasarotana:
Eo amin'ilay lavaka dia ny lapa,
Ao an-dapa - mpihira iray! (The Swallow)
Amin'ny ririnina any an-tsaha,
Tamin'ny lohataona aho dia nihazakazaka nankany amin'ny renirano. (Snow)
Misy ala, saha ary tendrombohitra,
Ny ala sy zaridaina rehetra.
Mihira amin'ny rano izy.
Mihirà, mihomehy, mitsikia! "
Ny pipa dia mihaino lavitra lavitra.
Mifoha izy rehetra ... (Aprily)
Toa rahona maitso ny zaridaina.
Poplar ao amin'ny maitso maitso sy ny oaks ary maples.
Inona no nisokatra tany amin'ireo sampana ary rava ny volana aprily? (Feosy, voa)
Any ivelan '
Ary mihira izy hoe: "Tonga ny lohataona!"
Ary ny sifotra mangatsiaka,
Nihodinkodina tamin'ireny fihodinana ireny! "
Henoy any an-tampon-trano: "Slap-slap-slap!"
Tondra-drano kely izany. (Capel)
Androany aho tsy mpihaino,
Satria ny fialan-dreniko.
Nofihiniko ho azy ny fehezam-boninkazo.
Efa dimy taona aho izao!
Ary tsy kamo loatra aho hanadio.
Eritrereto hoe andro inona?
Tonga isan-taona izy,
Ho an'ny lohataona lohataona. (8 martsa, Andro iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy)
Eo am-baravarankely izy dia ao anaty vilany,
Misy tomatena sy voninkazo.
Ny lohataona ihany no nanomboka,
Ary efa maitso izy! (Ketsa)
Fihirana gymnastics ho an'ny zazalahy
Ny sarin'ny Taombaovao ho an'ny ankizy
Ankizy Demi Moore
Ahoana no hilalao gidra?
Manana mibontsina ny zaza
Zanakalahin'i Arnold Schwarzenegger
Fihetseham-po amin'ny ankizy
Modely amin'ny rafi-masoandro amin'ny tananao manokana
Chastushki nahazo diplaoma tao amin'ny kindergarten
Ahoana ny fomba hanasarahana zaza iray hatory miaraka amin'ny reniny?
Fampandrosoana zaza 3 taona
Fiarovana ny ankizy mandritra ny fahavaratra - fanaraha-maso ho an'ny ray aman-dreny
Adaptation ny mpianatra voalohany amin'ny sekoly
Latabatra sy seza ankizy hatramin'ny 3 taona
Vidiny mahasoa ho an'ny nify
Nahoana ianao no manonofy fa te hamono anao?
Nahoana ny ankizy no mitora-jaza amin'ny nofy?
Kate Middleton tamin'ny fomba mahazatra dia nanatrika ny sekoly tany Oxford
Inona no ataon'i Adriano Celentano ankehitriny?
Entana mandritra ny fitondrana vohoka mandritra ny telo volana fahatelo
Tena ilaina ny dite - TOP-11 karazana tea tena ilaina
Sakam-boankazo ho an'ny fitehirizana sakafo
Nahatsikaritra ny mpisera Aterineto i Mom Jennifer Lopez
Star beauties amin'ny kapa mena amin'ny Ball of the Institute of Costume-2016
Inona no dikan'ny sakafo AO?
Ahoana no fijerena antitra?
Ireo zoro any Sipra
Cathedral of Guapulo
Fashionable blouses 2014
Postinor - ny vokatra hafa
Ny immunoglobulin amin'ny tsindrona boribory amin'ny encephalitis
Adolantsa amin'ny fampinonoana
Demi Moore sy Ashton Kutcher
Ny votoatin'ny kalokalo misy kakaô
Funchoza misy kirany
Alefaso miaraka amin'ny tsaramaso
Tenda pershit - haingana be hanasitranana?